ICape Iqedela Isigaba Sokuqala Sokuvalwa Kwecanal - I-Ellicott Dredges Blog
Mashi 1, 2012
ICape Coral, eFlorida
Source: ICape Coral Daily Breeze
Idolobha kanye nenkampani yokudonsela phansi iqede isigaba sokuqala sohlelo oluyinhloko lokwemba ukuphathwa kulo lonke uhlelo lwemisele yedolobha.
UMichael Ilczyszyn, umphathi webhizinisi ledolobha, noJack Adams waseGator Dredging wethule inkulumo yakhe eMkhandlwini Wedolobha ngesikhathi sokucobelelana ngolwazi ngoMsombuluko eCity Hall ngohlelo lwawo lokudonsela amanzi emadolobheni aseNingizimu mpumalanga.
Isethulo sonke, wonke amakhasi we-179, singabonakala ku-inthanethi. U-Adams no-Ilczyszyn banikeze umkhandlu amaphuzu avelele.
I-quadrant yaseningizimu-mpumalanga, ene-349 ebizwa ngama-canna kumamayela we-115, itholakala eningizimu yeHancock Bridge Parkway nasempumalanga yeSanta Barbara Boulevard futhi izokwehliswa, kusukela ekuqaleni kuka-Ephreli, esikhathini esiyiminyaka emithathu.
I-quadrant eseningizimu-mpumalanga, engakakhishwa eminyakeni ecishe ibe ngu-20, kufanele igcwaliswe ngemali yamanje, nangezindlela ezivumelekile zokwemba, kusho u-Ilczyszyn.
Kuwo wonke, amawadi we-cubic we-42,868 we-sediment kulindeleke ukuba adilizwe kusuka phansi kwemisele ukuze iphinde isungule ukujula okuvunyelwe.
Ukwenza isampula nokuchayeka kwenziwa ezindaweni ezinhlanu kulo lonke leli quadrant.
I-Ellicott® Brand 300 SL Swinging Dragon® dredge iyasetshenziswa ohlelweni lwemisele yaseCape Coral.
Imisele yaseningizimu-mpumalanga yonke yayizwakala futhi imisele ye-53 enwebeka ngamamayela we-19 noma ngaphezulu ubude idinga inhlolovo ene-hydrographic eningilizayo.
Imisebenzi eyisishiyagalombili eyenziwe ngesikhathi secebo lokufunda ibandakanya ukukhala ngomsele, ukuqoqwa kwedatha, inhlolovo ye-hydrographic, isampula sediment, indawo enamanzi, izinga lokuhlolwa kwezinsizakalo, ukuthuthukiswa kwepulani kanye nombiko.
UMkhandlu uChristian Chulakes-Leetz ube nokuthile akhathazekile ngohlelo oluphambili, njengokuthi imali ezobekwa phansi izokhokhelwa kanjani nokuthi izothatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi iphinde ibhalwe.
U-Ilczyszyn uthe kuzosuka emalini ejwayelekile engu- $ 1million kuya ku- $ 1.2 million ukukhokhwa kwedolobha minyaka yonke nokuthi kuzothatha iminyaka eyi-15-20 ngaphambi kokuthi i-quadrant iphinde iphinde idilizwe, kungacatshangelwa ukuthi akukho okungakaze kwenzeke.
ULeetz ubekhathazekile nangokwakhiwa kwendawo edonsayo phansi kwemisele yemisele.
"Akuyona into enosilika nekhwalithi ephezulu yokwemba kabusha," kusho u-Adams. "Asizange sihlaziye amakhemikhali ngoba ngaphandle kokuyishukumisa, besingeke sazi ukwakheka kwamakhemikhali."
UKhansmember Marty McClain uthe ufuna uhlelo lokudonswa kwempahla futhi wabuza nokuthi ukwenziwa kabusha kwethala kungenziwa maphakathi nemisele. U-Adams no-Ilczyszyn bathi kungenzeka zombili lezi zinto.
Inhloso yokudicilela phansi ukugqugquzela ukugeleza kwamanzi ngendlela efanele, ukunciphisa izikhukhula, ukuhlinzeka ngemithamo yemvula ngesikhathi sesiphepho nangemicimbi yokugcwala, ukwenza ngcono imvelo kanye nokuhlinzeka ngamanzi aphephile.
Ishicilelwe kabusha kusuka ICape Coral Daily Breeze
Qalisa Iphrojekthi Yakho Yokukhipha Umsele Nge-Ellicott